Iyo 12-inch MacBook yakawedzera kune Apple's "Vintage" runyorwa | Ndinobva mac
Iyo Cupertino yakasimba ichangobva kuwedzera kune iyo runyorwa rwezvigadzirwa zvekare zvinonzi "vintage" iyo MacBook Retina ine 12-inch kuratidza. Iko kukanganisa kwakatangwa kekutanga muna Kubvumbi 2015 yaive yekutanga kuwedzera iyo keyboard ine butterfly mashini. Isu tese tinoziva matambudziko uye zvichemo zvakagamuchirwa nemakomputa aya nekuda kwekhibhodi iyo pakutanga yaitaridzika kunge keyboard iyo yaizotungamira shanduko kune yakajairwa scissor system, asi pakupedzisira iyo MacBook Pro yazvino yakachinjira kumashure kune chigero ...
Nezve antique kana vintage zvigadzirwa
Apple inofunga zvekare kana zvigadzirwa zvevintage izvo zviri mu kuti zvave nemakore anodarika mashanu asi asingasviki makore manomwe kubva zvavakarega kugoverwa vachitengesa. Mune ino kesi, iyo Apple timu yakatangwa muna 2015 ine makore matanhatu uye nekudaro inopfuura.
Uye zvakare, iyi 12-inch MacBook yakamira kutengeswa makore mashoma apfuura saka isu takatarisana nekombuta yekare. Asi kana iwe wakaita seni ndine imwe yeaya MacBook uye uchida kugadzirisa unogona kunge uine zvimwe zvikamu zvekusiya sezvo zvichizoenderana nekuwanikwa kwezvikamu. Zvinoreva zvakajeka kuti havasi vese michina inozogona kugadziriswa mune kukanganisika kwakakomba, asi mamwe acho anozokwanisa kugamuchira zvikamu zvisina dambudziko kunyangwe ivo vari pane ino runyorwa.
Nguva inopfuura kune ese maMacBooks ayo aive ekutanga kuvhurwa pasina vateveri vemukati, iine bhatiri yakaiswa mumhando yemabhalconi, nemutengo waive usina kunyanya kudhura uye nemamwe manyorerwo senge atotaurwa kare butterfly keyboard, zvinoitika kuve zvakanyorwa neApple sechigadzirwa chekare. Iye zvino tinotarisira kuti MacBook Pros nyowani ichatora nzvimbo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook » Iyo 12-inch MacBook yakawedzera kune Apple's "Vintage" runyorwa
14-inch uye 16-inch MacBook Pro mini-LEDs dzinogona kutanga munaGunyana